at 10:45 AM Labels: သတ်သတ်လွတ်, ဟင်းရံ
သတ်သတ်လွတ်ဟင်းလျာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း အခွံ (ခွန်လင်းချစ်သူ)က ဟင်းသီးဟင်းရွက် သတ်သတ်လွတ်ဟင်းလေးတွေ ချက်ကျွေးပါဦးလို့ ဆိုလာတာကြောင့် ကျွန်မ ဒီနေ့ ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်လုပ်ကျွေးပါ့မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငရုတ်သီးအလှော်ထောင်း၊ ပဲပုပ်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့ ပူစီနံ အနည်းငယ်တို့ပါနော်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပူစီနံ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို ရေဆေးပြီးရေစစ်ပေးထားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို မီးသွေးမီးဖိုထဲ ထည့်ပြီး မီးအုံးပေးပါ။ မီးအုံးဖို့ အခက်အခဲရှိရင် ဒယ်အိုးထဲ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ထည့်၊ ရေလေးထည့်ပြီး ရေခမ်းပြုတ်ပေးပါနော်။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာပြီး ရေဆေးပေးထားပါ။ ပြီးတော့မှ ကြက်သွန်နီကို မထူမပါးလှီးပြီး ရေဆေးပြီး ရေစစ်ပေးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်း ဓားပြားရိုက်ပေးထားပါ။ ပဲပုတ်တစ်ချပ်ကိုလည်း ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန် အကျက်ညီအောင် မီးကင်ပြီး မညက်တညက်လေး ထောင်းထားပေးပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း မထူမပါးလှီးပေးထားပါ။ (မီးအုံးပြီး သို့မဟုတ် လှော်ပြီးထည့်လျှင်လည်း ရပါတယ်နော်။) ပူစီနံကိုလည်း အညွန့်လေးတွေ ချွေပြီးထည့်ပေးပါ။ ပူစီနံ မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ နံနံပင် ဒါမှမဟုတ် ကြက်သွန်မြိတ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ ခရမ်းချဉ်သီးရပြီဆိုရင် အအေးခံ၊ ပြီးတော့ အပြင်က အခွံလေးကို နွှာ၊ အသားတွေကို ဇွန်းလေးနဲ့ အသာအယာခြစ်ယူပြီး ပန်းကန်လုံးထဲ ထည့်ထားပေးပါ။ ပြီးတော့ ထောင်းထားတဲ့ ပဲပုတ်လေးကိုထည့်၊
မထူမပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီနဲ့ ဓားပြားရိုက်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်၊ လှီးထားတဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေထည့်၊ ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့်လေးလည်း ထည့်၊ အားလေး၊ အချိုမှုန့်လေးထည့်ပြီး ပူစီနံအုပ်ပြီးမွှေလိုက်ပါနော်။ ပဲပုတ်ထောင်းနံ့သင်းသင်းလေး၊ အရသာချဉ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ သတ်သတ်လွတ်ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်လေး ရပါပြီနော်။ တို့စရာအနေနဲ့ ဘရိုကိုလီပြုတ်၊ ကိုက်လန်ဖူးပြုတ်၊ မုန်ညင်းဖူးပြုတ်တို့နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်။
Chit Lay Pyay February 2, 2008 at 12:03 PM
ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော်ကိုတော့ ဒီနေ့ပဲ အကောင် အထည် ဖော်လိုက်မယ်၊ ကျေးဇူးပါ၊
ထွန်း February 2, 2008 at 1:14 PM
အာ နောက်ကျသွားပြီ ချစ်လေပြေ ဦးသွားပြီ ဂလု ဂလု
lily htut April 25, 2011 at 1:17 AM
thank u so much! today my hubby will cook it for me. :)